Bible Mu Nsɛm Abraham—Onyankopɔn Adamfo - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
WƆFRƐ mmeae a nnipa kɔtrae wɔ Nsuyiri no akyi no biako Ur. Ɛbɛyɛɛ kurow titiriw a adan a ɛyɛ fɛ wom. Nanso na nnipa a wɔwɔ hɔ no som abosom. Saa nso na wɔyɛe wɔ Babel. Na nnipa a wɔwɔ Ur ne Babel no nte sɛ Noa ne ne ba Sem a wɔkɔɔ so som Yehowa no.
Akyiri yi, nsuyiri no akyi mfe 350 no, gyidini Noa wui. Ɛno akyi mfe abien pɛ na wɔwoo ɔbarima a wuhu wɔ mfonini yi mu no. Na ɔyɛ nipa titiriw ma Onyankopɔn. Wɔfrɛ no Abraham. Ná ɔne n’abusuafo te Ur kurow no mu.
Da koro Yehowa ka kyerɛɛ Abraham sɛ: ‘Fi Ur ne w’abusuafo mu, na kɔ ɔman a mɛkyerɛ wo no mu.’ So Abraham tiee Onyankopɔn ma ogyaw anigyede a ɛwɔ Ur no nyinaa anaa? Yiw. Na esiane sɛ Abraham tiee Onyankopɔn bere nyinaa nti, wɔbɛfrɛɛ no Onyankopɔn adamfo.
Abraham abusuafo bi ne no kɔe bere a ofii Ur no. Ne papa Tera kaa ne ho. Na ne nuabarima ba Lot nso ne no kɔe. Ne ne yere Sara nso. Wokoduu baabi a wɔfrɛ hɔ Haran, na Tera wui. Ná wɔne Ur ntam aware.
Bere bi akyi no Abraham ne ne fifo fii Haran na wɔbaa asase a wɔfrɛ no Kanaan no so. Ɛhɔ no Yehowa kae sɛ: ‘Asase yi na mede mɛma wo mma.’ Abraham traa Kanaan na ɔtraa ntamadan mu.
Onyankopɔn fii ase boaa Abraham na obenyaa nguan ne mmoa afoforo pii, ne nkoa ahaha. Nanso na ɔne ne yere Sara nni ba.
Bere a Abraham dii mfe 99 no, Yehowa kae sɛ: ‘Mehyɛ wo bɔ sɛ wobɛyɛ aman pii agya.’ Nanso na ɛbɛyɛ dɛn na aba saa, bere a na Abraham ne Sara anyin dodo sɛ wɔbɛwo ba no?
Nnipa bɛn na wɔtraa Ur kurow no mu?
Hena ne ɔbarima a ɔwɔ mfonini no mu no, wɔwoo no bere bɛn, na ɛhe na na ɔte?
Dɛn na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Abraham sɛ ɔnyɛ?
Adɛn nti na wɔfrɛɛ Abraham Onyankopɔn adamfo?
Bere a Abraham refi Ur no, henanom na wɔne no kɔe?
Abraham duu Kanaan no, asɛm bɛn na Onyankopɔn ka kyerɛɛ no?
Bere a Abraham dii mfe 99 no, dɛn na Onyankopɔn de hyɛɛ no bɔ?
Kenkan Genesis 11:27-32.
Abusuabɔ bɛn na ná ɛda Abraham ne Lot ntam? (Gen. 11:27)
Ɛwom sɛ wɔka no sɛ Tera na ɔne n’abusuafo tu kɔtraa Kanaan fam de, nanso yɛyɛ dɛn hu sɛ Abraham na ɔde adwene bae sɛ wontu, na adɛn nti na ɔyɛɛ saa? (Gen. 11:31; Aso. 7:2-4)
Kenkan Genesis 12:1-7.
Bere a Abraham duu Kanaan asase so no, Yehowa trɛw ɔne Abraham apam no mu koduu he? (Gen. 12:7)
Kenkan Genesis 17:1-8, 15-17.
Abram din sesã yɛɛ dɛn wɔ bere a odii mfe 99 no, na dɛn ntia? (Gen. 17:5)
Nhyira bɛn na Yehowa hyɛɛ Sara bɔ sɛ ɔde bɛma no daakye? (Gen. 17:15, 16)
Kenkan Genesis 18:9-19.
Agyanom asɛyɛde bɛn na ɛda adi wɔ Genesis 18:19? (Deut. 6:6, 7; Efe. 6:4)
Dɛn na ɛtoo Sara a ɛkyerɛ sɛ yentumi mfa biribiara nsuma Yehowa? (Gen. 18:12, 15; Dw. 44:21)